Betfair Scommesse Sportive | Betfair Ao Vivo | အပိုဆု | App - bettingday.xyz | Bettingday
Chi E 'BETFAIR
တွင် 2000, Betfair သည်အွန်လိုင်းကစားသမားများကိုတံခါးဖွင့်ပေးခဲ့သည်, ဝန်ဆောင်မှုသာ Betfair ဖလှယ်မှုဖြစ်ခဲ့သည်. မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းသူတို့သည်ကောင်းမွန်သောအားကစားပေါ်တယ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်, ပျော်စရာအွန်လိုင်းကာစီနိုနှင့်ကောင်းသောဖဲချပ်ဝန်ဆောင်မှု, အဆိုပါ workhorse Betfair စတော့အိတ်ချိန်းနေဆဲဖြစ်သည်. ထက်ပိုအတူ5တစ်နေ့လျှင်သန်းပေါင်းများစွာအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည်.
Betfair သည်ပရီးမီးယားလိဂ်တွင်အာဆင်နယ်ကဲ့သို့ကမကထပြုထားသောအသင်းများနှင့်လည်းအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်, ဆောက်သမ်တန်နှင့် Leicester စီးတီး. Nella Liga သည် FC Barcelona ကိုစပွန်ဆာပေးပြီး၊ Serie A ရှိ Juventus ကို Betfair ကကူညီသည်.
ယနေ့တွင်, Betfair မှာပိုပါတယ်3ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာနီးပါးအတွက်န်ဆောင်မှုပေးသည် 20 ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများ. အီတလီမှာ, သူတို့ AAMS လိုင်စင်ရနေကြသည်.
100% ယူရို ၂၀ အထိ
100% ယူရို ၁၅ အထိ
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကကြိုဆိုပါတယ်, Bookmaker များအနေဖြင့်၎င်းတို့တွင်ရှုထောင့်များစွာရှိသည်ကိုပြသနေသည့်အချက်တစ်ချက်. တချို့ကပိုမိုမြင့်မားသောငွေသားဆုလာဘ်ကိုဆက်ကပ်, ဒါပေမယ့်ရရှိရန်ပိုမိုခက်ခဲ, အခြားသူများကအရေအတွက်ကန့်သတ်ထားရန်ပိုနှစ်သက်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကကစားသမားများကသူတို့ကိုအလွယ်တကူပြန်အမ်းပါစေ. Betfair သည်အဆုံးစွန်၏ဘေးဘက်တွင်အခိုင်အမာနေရာယူသည်, အသုံးပြုသူများအတွက်၎င်းသည်အမြဲတမ်းအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်.
အားကစားလောင်းကစားခြင်းအတွက်လောင်းကြေးတစ်ခုရှိပါသည် 50% စစ်ဆေးမှုများအဖြစ်မကြာမီပြုလုပ်နိဂုံးချုပ်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြောင်းအပ်နှံသည့်ငွေပမာဏအပေါ်. ပဏာမခြေလှမ်းကိုလက်လှမ်းမီရန်အနည်းဆုံးအပ်နှံရန်လုံလောက်သည် $ 15 အကောင့်ပေါ်မှာ, နှင့်အများဆုံးငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ် 25 €. အကောင့်၏ activation ကတည်းက, သင်တို့သည်လည်းခံရကြလိမ့်မည်5တစ်ပတ်လျှင်ယူရိုသည်ပါရီတွင် Serie A ကုန်ဆုံးချိန်အထိကုန်ဆုံးခဲ့သည်. လက်ခံရရှိရန် Betfair ကိုအောက်ပါညွှန်ကြားချက်များတွင်5ပရိုမိုးရှင်းအတွက်တစ်ပတ်လျှင်ယူရိုကိုသင်မှတ်ပုံတင်ရမည်၊ အနည်းဆုံးယူရိုတန်ဖိုးဖြင့်လောင်းနိုင်သည်5ခုနစ်ရက်တိုင်း.
site ၏အခြားဒေသများကိုတူညီသောမြှင့်တင်မှုဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်, အရာထို့ကြောင့်လောင်းကစားရုံများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်, Betfair ကဒ်အထိုင်. ထို့နောက်ပင်, ချက်ချင်းတိုးတက်သောအပိုဆုကြေးရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်, သို့သော်ဤတစ်ကြိမ်တွင်မှတ်ပုံတင်နေစဉ် casita ကုဒ်ကိုညွှန်ပြရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်. ဆု၏ပထမအပိုင်းမှာသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏရှိသည် 20 ယူရိုနှင့်သင်အနည်းဆုံးအနိုင်ရခြင်းဖြင့်ရ 10 ယူရိုပါရီ, Baccarat မှအပအချိန်နှင့်ကစားပွဲတိုင်း၌ကစားစရာမလိုဘဲ. သူတို့ကသင့်ရဲ့ပဲရစ်အတွက်ရေတွက်နေကြသည်, သူတို့မှာအောင်မြင်မှုနိမ့်နိူင်ဖို့လိုတယ် 75%: ဆိုလိုသည်မှာ, ဥပမာအားဖြင့်, ထို, အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်ကစားတဲ့အပေါ်တစ်ပြိုင်နက်တည်းအာရုံစူးစိုက်, သင်အပိုဆုကြေးမရနိုင်ပါ . €၏တိုးတက်သောဆုကြေးငွေသည် 200, သို့သော်, ဒီကိစ္စကအရမ်းရှုပ်ထွေးလာတယ်. ဤဆောင်းပါးအားအရစ်ကျငါးခုဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, လိုအပ်သလို, 10, 15, 25, 50 င 100 ယူရို; တစ် ဦး ချင်းစီကဏ္sectionsများသော့ဖွင့်ပမာဏသည် slot နှစ်ခုဖြစ်ကြသည် 100, 225, 500, 1250 င 3000 ယူရို. ဤကိစ္စတွင်, သို့သော်, ဂိမ်းရောက်ရှိခဲ့သည်စုစုပေါင်းအသံအတိုးအကျယ်တွက်ချက်ရန်သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောအလေးရှိသည်: slot များသာထည့် ၀ င်မှုအနားသတ်ရှိသည် 100%, အခြားဂိမ်းအားလုံးအတွက်မူ၎င်းသည်ညီသည်သို့မဟုတ်ညီမျှသည် 25%.
စတင် FOR BFAFAIR
မင်္ဂလာပါ, ကျွန်ုပ်တို့ Bet365 နှင့်မတူသည်မှာအသစ်စတင်သူများအတွက်သို့မဟုတ်ဂိမ်းလောကတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိနေသူများအတွက်အလွန်သိသာထင်ရှားသည့်ဂရပ်ဖစ်ရှိသည်။.
သင်တန်း, နှင့်ပတ်သက် “အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များ”, ငွေလဲလှယ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံနည်းသောကစားသမားများအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဲ့သို့သဘောပေါက်ရန်ခက်ခဲသည်, ငါတို့ရဲ့အကြံပေးချက်ကစီးရီးတွေကစားဖို့ပဲ, သို့မဟုတ် Betfair site အတွင်းရှိဂရုတစိုက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်လဲလှယ်သည့်သင်ခန်းစာများပါသောစာရင်း.
ဒီရွေးချယ်မှုနှစ်ခုရဲ့အယူအဆတွေကိုလက်ခံဖို့အချိန်ယူရမှာဖြစ်ပြီးသင်ဟာသင့်ရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသေချာပေါက်မှသာငွေသားနဲ့လဲလှယ်ရေးစနစ်ကိုစတင်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမှားထဲ ၀ င်ဖို့လွယ်ကူပြီး paris မကောင်းရင်ဖြစ်စေ၊. ရလဒ်အနေဖြင့်သင်စတင်သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏထက်ပိုပြီးရှုံးသည်.
Betfair.it သည်သင်အားကစားအမျိုးမျိုးတွင်မည်သည့်အလောင်းအစားကိုမဆိုလုပ်ခွင့်ပေးသောပေါ်တူဂီတစ်ခုဖြစ်သည်, နှင့်အခန်းများဖဲချပ်ဝေကစားသမားများနှင့်လောင်းကစားရုံပရိတ်သတ်များအဘို့အဆက်ကပ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပုံမှန် AAMS လိုင်စင်သည်အီတလီရှိအလောင်းအစားများလဲလှယ်ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည့်အချိန်တွင်တစ်ခုတည်းသောအော်ပရေတာဖြစ်သည်, အရာလာမည့်အပိုဒ်တွင်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မည်.
ပါရီ•ဘောလုံးအားကစား, တောင်း, ဘော်လီဘော, အင်ဂျင်: မျိုးစုံ, Unire အီးစနစ်များတိုက်ရိုက်လောင်းကစားလဲလှယ်ခြင်း
•လောင်းကစားရုံတွေထဲမှာ, ရောင်းရန်ထီပေါက်, စားပွဲများ, ကဒ်ဂိမ်းများ, ဗွီဒီယိုဖဲချပ်နှင့် Arcade ဂိမ်းများ
• Poker: Texas Hold'em အပါအ ၀ င်အွန်လိုင်းဂိမ်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး, ငွေသားဂိမ်းစားပွဲ, tornei S & ဂ
Betfair တွင်ကစားသမားအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်အထက်ပါလင့်ခ်ကို နှိပ်၍ စာရင်းသွင်းခြင်းဖြင့်ပေါ်တူဂီမူလစာမျက်နှာကိုကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည်: ဖဲချပ်ဝေကိစ္စတွင်ဂိမ်းဆော့ဝဲလ်ကိုအခြားအပိုင်းများသို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသည်သတ်မှတ်ထားသောနေရာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရမည်. မှတ်ပုံတင်သည့်အခါရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာရွေးချယ်နိုင်သော Betfair ပရိုမိုးရှင်းကုဒ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်.
ဆိုက်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကသင်၏အချက်အလက်နှင့်ပုံစံကိုဖြည့်ပါ, Betfair ပရိုမိုးရှင်းကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ အောက်ပါ ၀ င်ရောက်မှုတွင်ပါ ၀ င်မည့်ဂိမ်းအကောင့်နှင့်အထောက်အထားများကိုမည်သို့ငွေဖြည့်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ.
နှင့်အတူ 100 ၎င်း၏ဂိမ်းရည်ညွှန်းဘောင်မှဂိမ်းများနှင့်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြစ်နိုင်ခြေများစွာရှိသည်, ဒီပေါ်တယ်သည်ကျွန်တော်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်မှုတည်ဆောက်ထားသည့်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးထားသည်. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနည်းထုတ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်, Betfair သည်အရေအတွက်ကိုသာလုပ်ဆောင်သည်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအရည်အသွေးကိုအထက်, ဒါပေမယ့်အရည်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ.
Betfair သည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံချစ်သူများအတွက်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်, ထက်ပိုပြီးနှင့် 100 ရရှိနိုင်ဂိမ်းများနှင့်တစ်စိတ်ကူးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအင်္ဂါရပ်.
ဒီပလက်ဖောင်းကကမ်းလှမ်း slot ကခြောကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ကြသည်, ခေတ်သစ်နှင့်တောက်ပသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ, အွန်လိုင်းကစားနေစဉ်ပျော်စရာကိုခွင့်ပြုမည့်ဂိမ်းရွေးချယ်မှုများ, အခြေခံစီးပွားရေးဖလှယ်မှုမျှသာမဟုတ်ပါ.
အကောင်းဆုံး slot machine များကိုရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်, Mink Robocop, ၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကဒဏ္scienceာရီဆန်သောသိပ္ပံပညာစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင်အားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်, Jackရာ Jackpot နှင့် Top Gun, ဒီရုပ်ရှင်အရသာ (Tom Cruise ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောဒဏ္ာရီဆန်သောရုပ်ရှင်).
အားလုံး, ဒီအော်ပရေတာများကဲ့သို့ကမ်းလှမ်း 5-10, 15-20 payline slot နှစ်ခုနှင့်အတူလိုင်းများပေးဆောင် 25+ အခမဲ့လှည့်ဖျားဆုကြေးငွေလှည့်ဖျားနှင့်တကွအောက်ဘောလုံးကိုအတွက်ဒေါ်လာစျေးလိုင်း slot တွေတိုးတက်သောထီပေါက်, မျိုးစုံ, အဘယ်သူမျှမကျောက်ကိုအရွက်မယ့်အဆိုပြုချက်ကိုသည်.
ကျိန်းသေနှင့်အတူလောင်းကစားရုံareaရိယာစားပွဲပေါ်မှာထံအပ်နှံအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပဒေကြမ်း 11 အခြားရွေးချယ်စရာ alla ကစားတဲ့, ဘလက်ဘန်း, Baccarata, Poker နှင့်ဒဏ္theာရီပင် 7:30, အီတလီအစဉ်အလာ၏ဂန္ဂိမ်း.
ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ Real-time လောင်းကစားရုံများမှဆက်ကပ်အပ်နှံအပိုင်းအဖြစ်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်း. အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ Betfair, ငါတို့အဘို့, ခြောရာထူးတိုးသည်!
Betfair အတွက်အလောင်းအစားများသည်ဂိမ်းကမ်းလှမ်းမှု၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. အမြဲတမ်း, တကယ်တော့, Betfair Italia Srl, ပလက်ဖောင်းကိုထိန်းချုပ်တယ်, အားကစားကိုအာရုံစိုက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး. ဒီအထောက်အထားအဖြစ်, အာဆင်နယ်နှင့်ဘာစီလိုနာတို့နှင့်အတူဂုဏ်သတင်းလက်တွဲမှုလည်းရှိသည်, ကမ္ဘာပေါ်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးဘောလုံးအသင်းနှစ်ခုနှင့်အဓိကနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်.
အတော်များများတက်ကြွပရိုမိုးရှင်း (ဥပမာအားဖြင့်, အပိုဆုကြေး 25 ဘတ်စကတ်ဘောကစားရန်ရွေးချယ်သူများအတွက်) စိတ်ကူးဂရပ်ဖစ်, မယုံနိုင်လောက်အောင်ပဲရစ်နှင့်ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ရပ်များအရေအတွက်: Betfair ပဲရစ်အွန်လိုင်းသည် ပို၍ ကြီးသည်.
အဆိုပါဖဲချပ်ဝေareaရိယာကျွန်တော်တို့ကိုချောနှင့်အတူအံ့သြသွားတယ်, လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံ: အွန်လိုင်းဖဲချပ်ဝေကစားလိုသူများသည်ဤအော်ပရေတာကပေးအပ်သောအဆိုပြုချက်ကိုအလွန်ကျေနပ်အားရနိုင်သည်.
ပြိုင်ပွဲနေ့တိုင်းရာပေါင်းများစွာတက်ကြွစွာဖြစ်ကြသည်, အာမခံဆုရေကန်များနှင့်အတူ, ကစားသမားတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်များကိုဝယ်ယူရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်, နှင့်ဂရပ်ဖစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဆက်ဆက်. ပုံဖြည့်စွက်ရန်, €ကနေအထိ Betfair ဆုကြေးငွေတစ်စီးရီး 1.000 VIP ကလပ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်ကမ်းလှမ်းသောဇိမ်ခံအင်္ဂါရပ်များအပတ်စဉ် freerolls, အထိ, သဘာဝကျကျ, ကြိုဆိုပါတယ်.
Betfair Poker အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်သည်အလွန်ကောင်းသည်.
ဝင်ပေါက်၏ပြီးစီးပြီးနောက်, ပထမအဆင့်မှာပထမငွေသွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်. ငါတို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း, ငွေပေးချေမှုများထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကွဲပြားကြသည်နှင့်ငွေပေးချေ၏အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းပါဝင်သည်. အကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားမရှိဘူး (ဗီဇာ, ဗီဇာအီလက်ထရွန်, MasterCard, American Express), တစ်ခုတည်းအသုံးပြုမှု (Kalibra နှင့် Soldintasca), ဂန္ဘဏ်ငွေလွှဲ, Neteller, ပိုက်ဆံ, Paysafecard အီး Paypal. ကွဲပြားခြားနားသောကဒ်သုံးခုအထိသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်, ကြိုတင်ငွေဖြည့်ကဒ်ပြားဖြင့်ပြုလုပ်သောသိုက်များအတွက်, မှတ်ပုံတင်ပြီးဆုံးရန်အတွက်အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၏ရှေ့နှင့်နောက်မိတ္တူနှင့်အခွန်ကုဒ်၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုကြိုတင်ပေးပို့ရန်လိုအပ်သည်။.
ကြိုဆိုသည့်အပိုဆုကြေးကိုသင်ရရှိနိုင်သည့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများအားလုံးကိုရှင်းပြရန်ကောင်းပါသည်: ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောသိုက်, Paysafecard, Moneybookers သို့မဟုတ် Neteller သည်ကန ဦး အရောင်းမြှင့်တင်မှုအတွက်တရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရမည်. ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုအကြံပြုပါသည်, ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဟာအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးပဲ, ကရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ် / ကွှေး. ကဒ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးနောက်, လုံခြုံရေးကုဒ်, သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်နှင့်ပိုင်ရှင်အမည်, ဂိမ်းအကောင့်ထဲသို့သင်ထည့်သွင်းလိုသည့်ပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ. အဝါရောင်အကွက်ကိုသာနှိပ်ပါ “အပျငှေ” ဒါကြောင့်ပါပဲ.
Betfair နှင့် Paris တွင်ရှိသောငွေပမာဏ
ရွေးချယ်စရာများစွာအနက် Cash Out သည်ပါရီမြို့၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်ဘာလဲ? Bookmaker သည်ပဲရစ်ဆီသို့လုံခြုံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုဖန်တီးရန်၎င်း၏ဖောက်သည်များအားဖြစ်နိုင်ခြေကိုပေးသည်, သို့မဟုတ်သုံးစွဲထားပြီးဖြစ်သောငွေအတွက်. သင်၏လောင်းကြေးကိုသာရွေးပြီးပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့သည်ရရှိနိုင်သည့်စျေးကွက်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်. ဒီရွေးချယ်မှုပြီးနောက်သင်စောင့်ဆိုင်းနှင့်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ပြီးနောက်သူငွေပမာဏကိုပြန်အမ်းမည်.
ပြန်ခေါ်, လည်း, Betfair ကပဲရစ်မှာလဲလှယ်ဖို့ကမ်းလှမ်းတဲ့ ဦး ဆောင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်, အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဘွတ်ကင်ဖြစ်လာဘယ်မှာ, လက်ဆောင်ကမ်းလှမ်း. ဒါကမင်းကိုလုံးဝကွဲပြားတဲ့အမျိုးအစားပဲခွင့်ပြုတယ်, ဒါပေမယ့်လူကြိုက်များအီတလီနိုင်ငံအပြင်ဘက်. သင်၏အလောင်းအစားလုပ်နိုင်သည့်နောက်တစ်နည်း.
Betfair အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုမိုဘိုင်းပေါ်ရှိ web ဗားရှင်းနှင့်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုသည်ကွန်ပျူတာနှင့်တူညီသည်. ဖုန်းကိုအသုံးပြုရန်ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက်, iOS သို့မဟုတ် Android တွင် application ကို download လုပ်ရန်အကြံပြုသည်.
iPhone တွင် Betfair သည် Betfair ဌာနတစ်ခုစီအတွက်လျှောက်လွှာတစ်ခုပေးသည်. ကစားသမားများစွာသည်များသောအားဖြင့် Betfair ဌာနကိုစိတ်ဝင်စားကြပြီးလျှောက်လွှာတစ်ခုစီသည်သင်ကစားလိုသောဂိမ်းများအတွက်သင့်တော်သည်. ယခု App Store သည် application များကိုရှာနိုင်သည် 8 မင်္ဂလာပါ: Betfair အိုင်ဖုန်း sportive Betfair (Betfair Exchange), Betfair Poker, Betfair ကာစီနို, Betfair အားကစားပြိုင်ပွဲ Arcade, Betfair ကာစီနိုတိုက်ရိုက်, ဂိမ်းများဖလှယ်ခြင်း Betfair Betfair နှင့်ဘင်ဂိုကစား.
အရမ်းရှားတယ်, ဒါပေမယ့်မိုဘိုင်းဝဘ်ဗားရှင်းဟာ Android အတွက်အများဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်, လျှောက်လွှာ၏ရွေးချယ်မှု.
Betfair သည်အနည်းဆုံး 3G ရှိသည့် iPhone အားလုံးနှင့်အလုပ်လုပ်သည်. လျှောက်လွှာအားလုံးကို Betfair Betfair ကိုရှာဖွေရုံဖြင့် App Store တွင်ရှာနိုင်သည်. အဆိုပါ application များသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး Betfair application တစ်ခုတွင်ကစားခြင်းသည်သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်သည်. Apps များကို iPad နှင့် iPod တွင်မတူညီသောဘာသာစကားများဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်. အကယ်၍ သင် Betfair အပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်ချင်ပါကသူတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမှတဆင့်အသုံးပြုနိုင်သည်.
Android တွင် Betfair အက်ပလီကေးရှင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည် iPhone ကဲ့သို့မကောင်းပါ. သို့သျောလညျး, Betfair လဲလှယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို application တစ်ခုအနေဖြင့်မည်သို့ download ဆွဲရမည်နည်း။ သို့မဟုတ်လက်တွေ့တွင်တူညီသောအတွေ့အကြုံရှိရန်ထို site ကိုသုံးနိုင်သည်.
Save my name, အီးမေးလ်, and website in this browser for the next time I comment.